MAAL-GASHIGA SOMALILAND | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Waxa kale oo wiigan warku sheegayaa in Wasiirka Arimha dibada Dr. Sacad Cali Shire iyo safiirka Somaliland ee dalka Emiradku Bashe Cawil ay sameeyeen sharkada loogu magac daray “Somaliland Investment Company”, sharkadani oo ay xukuumada Somaliland uga wakiil noqon doonta maal gashiga caalamiga ah. Haddaba, mar labaad waan soo dhawaynayaa in ay shirkadani la abuuro, haddii ay sida u sheegan ay inaga cawinayso sidii dalka loo maal-gashan lahaa. Dalkeenu ma ah dal aqoonsi calamiya haysta, sida daraadeed waa loo bahan yahay hay’ad ama company maal-gashiga dalkeena iyo shirkada ama dalalka calamiga u fudidaya.
Haddii isku celcelis gurigii ama meharadii dalkeenu isticmalan 1KWh – 2 KWh maalintii, marka 100,000 guri/maharaded waxay u bahan yihiin 100 MWh ilaa 200 MWh maalintii. Qiyaas ahaan (rough estimate) warshada cusub ee dhuxul-dhagac (New Coal Power plant) waxay ku kacaysaa $3500 Per KWh. Marka qiimaha warshada dhuxul-dhagaxdu waxay ku kacaysa $350 Million ilaa $700 Million. Wayirada korantada qadaya (Power distribution included Substations, Transformers and power lines) waxa noqonayaan $100 Million kale.